Sawirro: Bahda Waxbarashada oo soo dhaweyn u sameyey Musharax Prof Shirwac - Ceelhuur Online
Home > Uncategorized > Sawirro: Bahda Waxbarashada oo soo dhaweyn u sameyey Musharax Prof Shirwac
April 10, 2017 admin568
Munaasabada ay soo agaasimeen bahda waxbarashada galmudug oo lagu soo dhaweeyay pro C/qaadir maxmed shirwac oo ka mida dadka hormuudka u ah waxbarashada soomaaliya ayaa xalay lagu qabtay magaalada Cadaado ee xarunta KM Maamulka Galmuudg.
Waxaa kasoo qeyb galay munasabadaan xildhibaano ka tirsan maamulka galmudug baxda waxbarashada maamulka degmada cadaado fanaaniin iyo qeybaha kale ee bulshada iyadoo dadkii ka hadlay ay sheegeen in pro shiwac uu ka mid yahaya halyeyayda waxbarashada soomaaliya.
Cismaan macali xasan geelle oo ka mida qaban qaabiyaasha xafladaan kula hadlayey macagac bahda waxbarshada ayaa prof Shirwac uga mahad celiyay dadaalkiisii hore sheegana inay garab taagayihiin maadaama uu ka mid yahay musharixiinta xilka madaxweynaha ee galmuudg.
Xildhibaan Garaad Yuusuf Maxamuud iyo Xildhibaan Xasan C/llaahi Maxmed oo ka mid abarlamanka maamulka Galmudug ee kasoo qeyb galay xafladaan ayaa sheegay inay tixgelinayaan rabitaanka bulshada hogaan wanaagsana u doori doonaan.
ugu danbeyn waxaa goobta ka hadlay pro C/qaadir maxamed shiwac in uu ka dhabey doono Balan qaadkiisa isalmrkana uu ka shaqeyn doona sidii loo hormarin lahaa bulshada ku nool gobolada dhaxe ee dalka soomaaliya.
Sawirro: Ciidamo Kumaandoos ah oo Tababar loo soo xiray
December 6, 2017 December 6, 2017 Cali Yare